एकपल्ट दुईजना साथीहरु जङ्गलमा जाँदै थिए, अकस्मात एउटा भालु हामम्फाल्दै आइपुग्यो । एकजना दगुर्दै रुख चढिहाल्यो र त्यहाँ लुकेर बस्यो । अर्को साथीले चाहिँ भाग्न भ्याएन । के गर्ने हो अब ? ऊ त्यही बाटोमा लम्पसार परेर पल्टियो र मरे जस्तो गर्यो । भालु उसको नजिक आयो र सुँघ्न थाल्यो । त्यो मान्छे सासै नफेरिकन पल्टिर...
कोरोनालाई संसारबाट छिटो भगाऊँ भाछ
इस्कुल जान्छु टम् टम् टम्
माघे झरीको छाता
जंगल नजिकको आश्रममा एकजना साधु बस्ने गर्थे । एक दिन उनले देखे– एउटा मूसोलाई बिरालोले खेदिरहेको छ । साधुलाई दया लाग्यो । उनले आफ्नो शक्तिले त्यो भागिरहेको मूसोलाई बिरालो बनाइदियो । बिरालो बनेपछि मूसाको ज्यान बच्यो । त्यो बिरालो साधुको आश्रममै बस्न थाल्यो । एक दिनको कुरा हो, त्यो बिरालोलाई ...
महान् वैज्ञानिक अबर्ट आइन्स्टाइनको सफलता वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन काममा अति नै तल्लीन भएर लाग्थे । उनले जुन कार्य सुरु गर्दथे त्यो कार्य पूर्ण गरेर मात्र छोड्थे । एक पटक आइन्स्टाइन शोधपत्र लेख्ने कार्य सकेर क्लिप (कागज च्याप्ने सामान) खोज्न थाले । टेबुल र दराजका सम्पूर्ण स्थानमा खोजिसक्दा पनि क्लिप फेला पार्न सकेनन् र अन्त्यम...
बाबा ! यो वर्ष दसैँ पनि आउँदैन हो ? बिहान बिहानै बालमनोभाव र बालाकाङ्क्षाले भरिएको छोरीको प्रश्नसँगै एकोहोरिएँ । त्यसपछि आजसम्म राम्रो निदाउन सकेको छैन । सोच्दैछु, के दैनिक जीविकाका कामकुरा रोकिएजस्तै चाडपर्व पनि यस वर्ष नहुने हो ? अनायासै लामो...
बालबालिकाका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रको संस्था युनिसेफका अनुसार कोरोना महामारी र लकडाउनजस्ता संकटका कारण संसारभरी करिब १५ करोड बालबालिका गरिबीको दलदलमा धेकेलिएका छन् । कोरोना संकटका कारण गरिब भएका बालबालिका मिलाएर अब संसारमा करिब १.२ अर्ब बालबालिका गरि...
महान् वैज्ञानिक अबर्ट आइन्स्टाइनको सफलता वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन काममा अति नै तल्लीन भएर लाग्थे । उनले जुन कार्य सुरु गर्दथे त्यो कार्य पूर्ण गरेर मात्र छोड्थे । एक पटक आइन्स्टाइन शोधपत्र लेख्ने कार्य सकेर क्लिप (कागज च्याप्ने सामान) खोज्न थाले । टेबुल र दराजका सम्पूर्ण स्था...